ray kurzweil: uMartin Vrijland
Tshintsha: ray kurzweil
Ukuba uthatha i-2030 uya kufumana ukungafi: ubomi obungunaphakade
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	18 Julayi 2018	• 4 Comments
Ku va isuntswana avareji izandi nisiva ekhohlo ekunene transhumanists abadumileyo, kodwa kuzo qiniseka ukuba xa ukususa 2030, ungenza kuzolula elide ngokwaneleyo ebomini bakho ubuncinane de kube ke elandelayo ezilishumi ukuya kwiminyaka elishumi elinesihlanu yokungafi. [...]
Iimpawu ezintathu zenza inethiwekhi yobuchopho (i-brain) kwaye isebenzise ingalo yombhobho
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	14 Meyi 2017	• 9 Comments
In 2015 wenza Miguel Nicolelis kunye noogxa bakhe Duke University Centre Medical e North Carolina, uphando ngempumelelo ukuhanjiswa ingalo virtual ngokusebenzisa ujongano kobuchopho iinkawu. Into abayenzayo yinto engaphambili kwinto esinokuyilindela kwiinkqubela ezinjengeenkampani ezinjengeGoogle. [...]
Ngaba u-Elon Musk umntu onokwenza nantoni na, iqhawe elitsha, i-American Dream ishishini lomninimzi we21 okanye nje i-DARPA ibhodi ye-cyborg ehleliweyo? Ukuba ukhangelelanisa naye udliwano-ndlebe naye, utyhawula iinkampani ezisemhlabeni ngokukhawuleza kunokuba unokubanda iifatata kwaye emva kweentsimbi ezincinane (ngenxa ye- [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	25 Aprili 2017	• 15 Comments
Ngelixa ihlabathi ligcinwa lihle kunye nosongelo lwemfazwe phakathi kweMelika kunye neNyakatho Korea, ukwethusa kunye nokusebenza kwezopolitiko, isitima se-transhumanism siyaqhubeka. Xa umfanekiso wehlabathi uqhubeka unemibala ngabaphathi beengcamango kwiindaba eziphathekayo malunga nezopolitiko, imfazwe, inkathazo, ukwesabisa, kunye neminye imisebenzi kwimigangatho yehlabathi, [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-12 Disemba 2016	• 24 Comments
Kwamanyathelo amaninzi ndathetha malunga neengcinga ze 'transhumanism' kunye 'nobungqina'. Bobabini yimiqathango ebhekisela kwixesha apho i-biology njengoko siyazi ukuba iya kuhamba ngokukhawuleza kwaye ngokuqinisekileyo idibanise neengqiqo zobulumko. Ingxelo enjalo yodwa iza kubangela abafundi abaninzi ukuba baphume kwaye baphakamise iilebe. Oku kwenzeka [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 3.529